Uncategorized Archives - Page2of 562 - Tha Dinn Oo
ကိုယျ့ဝမျးစာအကွောငျး ကိုယျပဲသိတာပါဆိုတဲ့ လူကွမျးသရုပျဆောငျကိုမှနျလေး
မှနျလေးကတော့ အနုပညာအလုပျတှေ မလုပျရတဲ့ အခြိနျမှာ သူငယျခငျြးရဲ့ ဆောကျလုပျရေး လုပျငနျးမှာ အလုပျဝငျလုပျနရေတယျလို့ ဆိုလာပါတယျ။လူကွမျးသရုပျဆောငျ မှနျလေးကတော့ COVID-19 ကာလမှာအနုပညာအလုပျတှေ မလုပျရတဲ့အတှကျ သူငယျခငျြးရဲ့ အကူအညီနဲ့ ရထားတဲ့ အလုပျလေး လုပျနတေယျလို့ဆိုပါတယျ။ မိသားစု စားဝတျနရေေးအတှကျ မဖွဈမနေ စီးပှားရှာရမှာပဲလို့လညျး ပွောပါတယျ။“ အခု ကြှနျတေျာ့ သူငယျခငျြး ကနျထရိုကျယူထားတဲ့နရောမှာ ကြှနျတေျာ့ကို အလုပျသမားခေါငျးဆိုပွီးတော့ ထားထားတယျ။ ကိုယျ့ဝမျးစာအကွောငျး ကိုယျပဲ သိတယျ။ COVID-19 ဖွဈနတေဲ့ အခြိနျမှာ မိသားစု တဈစုလုံးကိုတော့…
တိုက်စစ် မှူး မောင်မောင်လွင် ကို ကာ မ လိမ် လည် ရယူ မှု (ပုဒ်မ ၄၁၇) နဲ့ တရားစွဲလိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်နာ ခင်ငြိမ်းချမ်း မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် ဘောလုံးအားကစားသမားမောင်မောင်လွင်အားဇနီးဖြစ်သူ ဒီဇိုင်နာ မခင်ငြိမ်းချမ်းမှ အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး နှင့်လှိုင်မြို့နယ်ရားရုံးတို့တွင် ဦးတိုက်လျောက်၍ ပုဒ်မနှစ်ခုတို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားကြောင်း မခင်ငြိမ်းချမ်းကပြောသည်။ မောင်မော င်လွင် နှင့် မခင်ငြိမ်းချမ်းတို့သည် ပြီးခဲ့သောဖေဖော်ဝါရီလက တရားဝင်လက်ထက်ခဲ့ကြပြီး နောက်ပိုင်း၌ အဆင်မှုများ ရှိလာကာ မခင်ငြိမ်းချမ်းမှ ၄င်အား…
ရန် ကုန်ဆို တာ အမြဲနွေးထွေးလျ က် ပါ (မန္တလေးလူနာများ ကို ဝေဘာဂီ တွင် ကုပေးမည်)
ရန် ကုန်ဆို တာ အမြဲနွေးထွေးလျ က် ပါ (မန္တလေးလူနာများ ကို ဝေဘာဂီ တွင် ကုပေးမည်) မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်နေ အမျိုးသားနှစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့တွင် ကိုဗစ် ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ယနေ့ ည (၈) နာရီတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါပိုး အတည်ပြုလူနာ သုံးဦးသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့သူများ ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၌ အသွားအလာ ကန့်သတ်ထားရှိစဉ် ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရခြင်း…
“လမ်း မပေါက် ၊ စာသင်ကျောင်း မရှိတဲ့ရွာလေး မှာ တာဝန်ကျ တဲ့ ကျောင်းဆရာလေး ရဲ့ အံ့မခန်း စွမ်းဆောင်မှုများ”
“လမ်း မပေါက် ၊ စာသင်ကျောင်း မရှိတဲ့ရွာလေး မှာ တာဝန်ကျ တဲ့ ကျောင်းဆရာလေး ရဲ့ အံ့မခန်း စွမ်းဆောင်မှုများ” မိုင်း အနိုင်၊ ရွှေဖီမြေ လွယ်ပတ်ကျေးရွာကို ကျောင်းဆရာပြန်ရောက်လာလို့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ ရွာသားတွေက ပျော်ရွှင်ကြပေမယ့် ဒါဟာ ကျောင်းဆရာရဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပြန်ရောက်လာတာကိုတော့ သူတို့တွေ မသိကြပါဘူး။ ကျောင်းဆရာဖြစ်သူ မိုင်းထွန်းရွှေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူတို့ကို မပြောပြပါဘူး။ သူတို့တွေ စိတ်မကောင်းဖြစ်တာကို မမြင်ချင်လို့ မပြောပြတာလို့ မိုင်းထွန်းရွှေက ပြောပါတယ်။…
ကို ဗစ် ၁၉ ကာကွယ်ေ ဆး မတွေ့မချင်း ကျောင်းများ ပြန်ဖွင့်ခွ င့် ပြုမည်မဟုတ် ဟု သမ္မတ ဒူတာတေး ပြောပြီ
Posted by hanminhtet — May 26, 2020 in Uncategorized
ကို ဗစ် ၁၉ ကာကွယ်ေ ဆး မတွေ့မချင်း ကျောင်းများ ပြန်ဖွင့်ခွ င့် ပြုမည်မဟုတ် ဟု သမ္မတ ဒူတာတေး ပြောပြီ နို င်ငံအချို့တွင် စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီဖြစ်သော်လည်း ဖိလစ်ပိုင်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေး မရမချင်း ကျောင်းသားများကို ကျောင်းသွား ခွင့်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း သမ္မတ ရိုဒရီဂိုဒူတာတေးက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဖိလစ်ပိုင်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်း ကျောင်းသူကျောင်းသား ၂၅ သန်းအတွက် စာသင်ခန်းများကို မတ်လတွင်…
နိုင်ငံတော်မှ ယခုလwaveနဲ့ ငွေပို့ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်မှာ အမှန်တကယ်ငွေကြေးအဆင်မပြေသူများ ငွေရရှိ ရန် စာရင်းကောက် ခံပုံ ကို ရှင်းပြလာ တဲ့ ရာအိ မ် မူး …. ( အောက်ခြေထိ ထောက်ပံ့ငွေရပါစေ )
နိုင်ငံတော်မှ ယခုလwaveနဲ့ ငွေပို့ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်မှာ အမှန်တကယ်ငွေကြေးအဆင်မပြေသူများ ငွေရရှိ ရန် စာရင်းကောက် ခံပုံ ကို ရှင်းပြလာ တဲ့ ရာအိ မ် မူး …. ( အောက်ခြေထိ ထောက်ပံ့ငွေရပါစေ ) နိုင် ငံတော်က ယခုလwaveနဲ့ ငွေပို့ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်မှာ ကျမရာအိမ်မူး တယောက်အနေနဲ့ ကျမအပိုင်ရပ်ကွက်သို့စာရင်းကောက်ခံရာတွင် မိမိစိတ်သဘောဖြင့်မကောက်ခံပဲ အစုတစုတွင် ကျမယုံကြည်ရသည့် အိမ်တွင်လူစုကာ အချင်းချင်းအမှန်တကယ် အဆင်မပြေသည်ကို ထောက်ခံပေးသော ပြည်သူအားစာရင်း သွင်းကောက်ခံသွားခဲ့ပါသည်။ထိုသို့ ကောက်ခံရာတွင်အပိုင်းလိုက်လမ်းအလိုက်…
အိမ်ဆောက် တဲ့ နေရာမှာ အုတ် မသုံးနိုင်တဲ့ သူတွေအတွက်ကုန်ကျ စရိတ်သက် သာပြီး တစ်သက် တာ ခိုင်ခန့်စေ မဲ့ ဘိလပ်ထရံ လုပ်နည်းလေးပါ
အိမ်ဆောက် တဲ့ နေရာမှာ အုတ် မသုံးနိုင်တဲ့ သူတွေအတွက်ကုန်ကျ စရိတ်သက် သာပြီး တစ်သက် တာ ခိုင်ခန့်စေ မဲ့ ဘိလပ်ထရံ လုပ်နည်းလေးပါ ကုန်ကျ စရိတ်သက် သာပြီး တစ်သက် တာ ခိုင်ခန့်စေ မဲ့ ဘိလပ်ထရံ လုပ်နည်းလေးပါ အိမ်ဆောက်တဲ့ နေရာမှာ အုတ် မသုံးနိုင်တဲ့ သူတွေအတွက် ဘိလပ်ထရံ လုပ်နည်းလေး တင်းပေးလိုက်ပါတယ်.. ဒီနည်းက အုတ်စီပြီး လုပ်သလောက်မကုန်ပါဘူး ရိုးရိုး ထရံထက် စာရင်တော့ နဲနဲ…